MPEG oo waa nooc ka mid gaaban for "Guuritaanka Picture Khubarada Group" waa qoys ka kooban heerarka video riixo digital iyo qaabab file ah oo lagu horumariyo kooxda. Sida marka la barbar dhigo qaab kale, MPEG soo saarta video files in yihiin kuwo tayo fiican. MPEG-1 iyo 2 MPEG waa qaabab caanka ah ee kooxda.
MP4 kaas oo sidoo kale loo yaqaan MPEG-4 AVC asal ahaan waa soo gaabiyay ee MPEG-4 Qaybta 14 iyo waxay u taagan tahay Advanced Video sireed iyo sidoo kale waa qayb ka mid ah koox MPEG ah. MP4 ayaa sidoo kale la tixgelin karaa sidii qaabka weelka oo awood u user u leedahay in isku darka ah ee video, audio, weli images subtitles ad ka mid file ah.
Haddii aad rabtid inaad ku wareejiso ah MPEG video file joogo ku saabsan habka aad iPhone ama iPod ah ka dibna marka hore loo baahan yahay in diinta qaab MP4.
Part1: Best MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 ilaa MP4 Video Converter
Part2: MPEG Free / MPEG-1 / MPEG-2 ilaa Converter MP4
Part3: Extended Aqoonta MPEG / MPEG-1 / MEPG-2
1.1 Soo bandhig Wondershare Video Converter Ultimate
In kastoo ay jiraan dad badan oo video Converter software ee kaa caawinaya in aad si loogu badalo faylasha MPEG in qaab MP4 laakiin haddii aad raadinayso mid ka mid ah ugu wanaagsan ee qaybta ka dibna Wondershare Video Converter Ultimate hubaal cadayn doono inuu yahay dooqa ah badnaayeen. Software cajiibka ah ma aha oo kaliya badasha videos in qaabab kala duwan balse fuliya hawlaha kale oo badan sida tafatirka, duuban, gubasho, qabtay, hagaajinta, daawashada in ka badan 150 qaabab iyo kuwa kale. Software ayaa diyaar u ah Windows iyo sidoo kale nidaamka Mac iyo ilaaliyaa oo dhan video diinta u baahan yahay. Qaar ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee Wondershare Video Converter Ultimate waa sida soo socota:
Diinta 30 mar dhakhso: Sida la barbar dhigo software kale ee qaybta, Wondershare Video Converter Ultimate waa 30 jeer ka dhakhsi in ay xawaaraha.
Taageeridda tiro badan oo ah qaabab: software waxay ku siinayaan kala duwan oo ay ka buuxaan waafaqsan sida ay taageerto ka badan 150 qaabab leh ugu dambeeyay ee liiska la 4K qaab video.
Dhisay-DLNA Support: plugin ee muuqaalada software dhisay taageero DLNA in dhammaan qalabka shahaado ay ku jiraan PS3, Madaxweyne Siilaanyo 360 iyo kuwa kale
Mid ka mid ah downloader click: Waxaa jira button Download smart in software ah oo awood aad kala soo bixi video ah leh oo kaliya click hal. YouTube MP3 ayaa sidoo kale waxaa si toos ah lagala soo bixi karaa iyadoo la isticmaalayo software ah.
• Kuu ogolaanayaa diinta qalabka kala duwan: software ayaa aad u saamaxaaya in ay badalo filimada aad jeceshahay iyo video kale in files tayo sare leh oo la riyaaqay karaa qalabka kala duwan sida iPhone, iPad, huriyaan dab, Android iyo kuwo kale oo badan. Sidaas raaxaysan filim aad jeceshahay xitaa on go ah.
• Transfer aan USB: The files gediyay on software si fudud loo wareejin karaa Android iyo sidoo kale qalabka Apple oo aan wax baahi loo qabo cable USB. Shabakadda WiFi jira waxaa loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan faylasha.
1.2: Sida loo Isticmaalo Waxaa si loogu badalo Mpeg / Mpeg-1 / Mpeg-2 ilaa Mp4 in Talaabooyinka la Screenshots
Hoos siiyo waa tallaabooyinka si loogu badalo MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 ilaa MP4 isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate.
Tallaabada 1 Open software
Tallaabada ugu horaysa waa in aad kala soo bixi, rakibi oo u furan ah Wondershare Video Converter Ultimate software ku saabsan habka.
Tallaabada 2 dar faylasha
Hadda riix ah "Add files" doorasho ku darto files in aad rabto in aad si loogu badalo. Waxaad kale oo jiidi karaan jeedi faylasha. (Dooro file joogo MPEG ee ku saabsan habka aad doonayso in aad si loogu badalo).
Tallaabada 3 Dooro qaab wax soo saarka,
Hadda dhinaca midig ee software-ka, liiska qaabka wax soo saarka la siiyo kaas oo aad u baahan tahay in ay doortaan doorasho la doonayo. (Dooro MP4 si loogu badalo file MPEG si aad u qaab MP4)
Tallaabada 4 file badalo
Marka qaab wax soo saarka la doorto, guji "Beddelaan" badhanka in bilaabi doonaa hab-socodka ah ee diinta file.
Ka dib markii ay diinta ka guulaystay, software siin doono xaaladda ku saabsan isku mid.
2.1: Soo bandhig Wondershare Video Converter Free
Tani waa software cajiib ah oo awood aad si loogu badalo aad videos iyo audio in qaabab kala duwan waa in la jaan qaada your computer iyo qalab kale. Software Tani waa fududahay in la isticmaalo, laakiin sidoo kale lacag la'aan ah ma aha oo kaliya. Software waxaa taageera Mac sidoo kale nidaamka Windows oo qoreysa diinta ka tayo sare leh oo ay la socdaan hawlaha kale ee tafatir sida qoqobada, isagoo intaa ku daray watermarks, falinjeeerka iyo kuwa kale. Qaar ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee software-ka waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Fast xawaaraha diinta, software ka dhigayaa isticmaalka technology ugu dambeeyay iyo sidaas ayaa super si degdeg ah xawaaraha diinta.
Taageerada qaab badan: software waa la jaan qaada intooda badan ah qaabab ay ka mid yihiin MPEG, flash, AVI, MP4, 3GP, YouTube iyo kuwa kale.
Tayada Sare: kastoo software-ka waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan, laakiin waxa aanu u dhimayaan tayada iyo diinta ay tahay mid ka mid ah oo tayo sare leh si ay u bixiyaan khibrad video weyn.
Soo leh tafatirka, Everton iyo diinta, software ah sidoo kale u ogolaataa muuqaalada video tafatir sida falinjeeerka, isagoo intaa ku daray subtitles iyo watermarks, resetting size iyo kuwa kale si ay u kor-aragnimo guud.
Taageero Secure oo buuxa: software gabi ahaanba waa mid aamin ah iyo sidoo kale yimaado oo taageero 24/7.
2.2 Sida loo Isticmaalo Waxaa si loogu badalo MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 ilaa MP4
Hoos siiyo waa tallaabooyinka si loogu badalo MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 ilaa MP4 isticmaalaya Wondershare Video Converter Free.
Tallaabada ugu horaysa waa in aad kala soo bixi, rakibi oo ka dibna la furo software bilaash ah oo ku saabsan nidaamka.
Tallaabada 2 dar files
Next, ku dar files MPEG in aad rabto in aad si loogu badalo. Waayo, kanu, guji "Add files" doorasho ka dibna dooro uu soo gudbin meel gaarka ah. Waxaad kale oo jiidi karaan jeedi faylasha u baahan in la badaley. Diinta Dufcaddii sidoo kale waxaa la samayn karaa si loogu badalo files badan waqti.
Hadda dhinaca midig ee software-ka, liiska qaab Output la siiyo kaas oo aad u baahan tahay in la doorto ikhtiyaarka ah MP4 (si loogu badalo qaab MP4)
Tallaabada 4 badalo
Next aad u baahan tahay si ay u riix "badalo" in bilaabi doonaa hab-socodka ah ee diinta.
Marka hawlaha qaab beddelidda ay ka badan tahay, software tusi doonaa xaaladda.
Maxay ku kala duwan yihiin dhexdooda mpeg, mpeg-1, mpeg-2?
MPEG: Guuritaanka Picture Khubarada Group (MPEG) waa koox khubaro ah sameeyay IEC iyo ISO ah si loo dhigay heerarka audio iyo video riixo iyo qaadsiiyey. Sidoo kale waxaa loogu dhawaaqaa sida m-qabsatay dhidibkii, MPEG ayaa sidoo kale la tilmaamey kartaa sida heerka digital qoyska video riixo iyo sidoo kale qaabab file kooxda. Sida marka la barbar dhigo qaabab kale tartamaya sida QuickTime, Indeo iyo kuwa kale, MPEG soo saaray videos tayo fiican. The algorithms ee MPEG cadaadisaa xogta si ay u sameeyaan in jajabkii yar oo si fudud lagu kala qaadi karaa oo kadibna waa la decompressed karo. Jaangooyooyinka ugu weyn ee MPEG ka mid ah MPEG-1, MPEG2, MPEG-3 iyo MPEG-4.
MPEG-1: Tani caadiga ah ee MPEG bixisaa xal video ee 352 by 240 at 30fps iyo heerka ay tani tahay u riixo ee lossy oo ka mid ah Cajalado iyo videos. MPEG-1 waxaa loogu talagalay si ay u cadaadin xumu videos digital ah VHS-tayada iyo audio CD in 1.5Mbit oo aan khasaaro ka mid ah xad-dhaaf ah oo tayo leh. Format waxay soo saartaa ay videos in ay leeyihiin tayo leh taas oo wax yar hoos ku videos VCR caadiga ah. Format ayaa sidaas dhigaysa baahinta digital audio suurto gal ah.
MPEG-2: inta badan waxay MPEG-2 waxaa loo isticmaalaa sida qaab ka mid ah calaamadaha telefishinka dijital ah kuwaas oo baahisay cable tan kuwa dhulkuna oo si toos ah TV dayax-baahinta,. Tani waa qaab ku filan oo dhan heerarka ugu muhiimsan ee ay ka mid yihiin TV HDTV iyo NTSC. Format waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in uu cayimayaa filimada iyo qaabab barnaamij kale oo loo qaybiyey on DVD iyo cajalladaha kale. Saasaana ku qaata TV, TV, ciyaartoyda DVD iyo aaladaha kale ee waxaa loogu talagalay sida MPEG-2 caadiga ah.
Oo sidaas ha loo soo gabagabeeyay karaa in MPEG-2 waa bedelka ama MPEG-1 qaab oo uu leeyahay tayo wanaagsan. MPEG-1 waxaa asal ahaan loo isticmaalo VCD ah halka MPEG-2 ee caadiga ah waxa loo isticmaalaa DVD. Marka la eego isku geynta Deji inkastoo MPEG-2 waa ka sii adag laakiin waxa uu u adeegsanayaa bitrates sare iyo variable iyo sidoo kale xallinta sare.
Top 10 HD MP4 Movies Shabakadaha
MP4 Download: Halkee iyo Sidee loo Download?
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 ilaa MP4